भ्रष्टाचारमुक्तदेखि कलैयालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनेसम्म, यस्ता छन् उम्मेदवार
Tue, Jun 19, 2018 | 01:02:48 NST
07:04 AM (9months ago )
बारा, भदौ २८ – बाराको पहिलो नगरपालिका हुँदै अहिले उपमहानगर बनेको कलैया उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व हात पार्न उम्मेदवारहरु प्रयासरत छन् । यस नगरमा प्रमुखका लागि १२ जनाले मनोनयन दर्ता गराएकाले मुख्य राजनीतिक दलबिच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबिच यस नगरमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान नगरका बासिन्दाले गरेका छन् । यद्यपी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यी दलहरुलाई टक्कर दिने दाउमा छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद राधेचन्द्र यादवका छोरा एवं पार्टीका जिल्ला सदस्य राजेश राय यादव, नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहनु भएका उद्योग वाणिज्यसंघ बाराका अध्यक्ष विनोद साह, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य प्रमोद प्रसाद गुप्ता, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुकेश साह कलैया नगर प्रमुखको दौडमा हुनु हुन्छ ।
के छ त कलैया नगर प्रमुखका उम्मेदवारहरुको योजना ?
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार राजेश राय यादव
कलैया उपमहानगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई शिक्षा स्वास्थ्य रिंग रोड निर्माण गर्ने योजना यादवको छ । युवालाई रोजगार दिने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कलैया हाट बजारलाई व्यवस्थित र नमुना हाटबजारको रुपमा विकास गर्ने।
नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार विनोद साह
भौतिक पूर्वाधारको विकास, सुदृढ शहर, टोलटोलमा पक्की सडक निर्माण गर्ने छु । कलैयालाई हरियाली शहरको रुपमा विकास गर्ने र चक्रपथको निर्माण गर्ने योजना छ । भ्रष्टाचारलाई कलैयाबाट समाप्त पार्ने छु ।
फोरमका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार प्रमोद गुप्ता
छोरीहरुलाई शिक्षामा अगाडि ल्याउने, महिलाहरुको लागि सुरक्षित शहर बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने छु । ढल निकासको उचित व्यवस्थापन, प्रत्येक टोल टोलमा पिच सडक निर्माण गरी मुख्य कलैया हाट बजारसँग जोडने कलैयालाई समृद्ध शहर बनाउने छु ।
माओवादी मेयर उम्मदेवार मुकेश साह
अबको पालो युवाको हो । युवाको जोश जागरले कलैयाको विकास सम्भव छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, रिंगरोड निर्माण, ट्राफिक व्यवस्थापन, उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छु ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारहरुको योजना
नेपाली कांग्रेसका कृष्णव्रत सिंह
सामाजिक सदभाव कायम गरी, सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण, शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्ने छु । खेल मैदानको निर्माण गरी खेलकूदको विकास गर्नेछु । नगरको बजेटको दुरुपयोग रोक्ने आफनो सबभन्दा महत्वपूर्ण योजना छ । वनको संरक्षण, चुरेको दोहन रोक्ने छु ।
नेकपा एमालेका डा. कृष्ण पौडेल
महानगर बनाउने आधारशिला खडा गर्ने, दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य तत्काल थाल्न पहल र सहजीकरण गर्ने छु । उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित, कृषि पशुपालनको व्यवसायीक विकास, मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने छु ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल
परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी पार्टी हो । पर्यावरण पर्यटनको विकास, औधोगिकरण गर्ने, कृषि पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गरी हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्ने छु । प्रत्येक वडालाई राजमार्ग सँग जोडन पक्की बाटोको निर्माण गर्ने छु ।